သမိုင်းရာဇဝင် ဖြစ်ရပ်ဆန်း ဗိဿနိုး ကျိန်စာ ပျက်ပြယ် ပြီလို့ ယူဆမိတဲ့ အကြောင်း “ဦးကျော်သူ” ပြော – Let Pan Daily
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရားအထူးကိုင်းရှိုင်းပြီး နာမှုကူညီရေး လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း အားကြိုးမာန်တက်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဦးကျော်သူက သူ့ အနေနဲ့ ဗိဿနိုး ကျိန်စာ ပျက်ပြယ်ပြီလို့ ယူဆမိတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ရှင်းလင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဦးကျော်သူ ပြောခဲ့တာကတော့ ” ဗိဿနိုးကျိန်စာ ပျက်ပြယ်ပြီလား
ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကမ်း ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင် ခြေတော်ချခဲ့သည့် “ဖိုးဦးတောင်ဘုရား”သမိုင်းတွင် ပွေးဖိုနှင့်ပွေးမ တို့သည် မြတ်စွာဘုရားအားအကယ်၍ဖူးတွေ့ရပါက တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအမြန်လာခေါ်၍ မောင်မယ်စုံညီ မြတ်စွာဘုရားအား အတူတကွ ဖူးမျှော်ကြမည်ဟု ….
ဂတိသစ္စာပြု ခဲ့သော်လည်း ပွေးဖိုမှာ တောတွင်း အစာရှာရင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွမြန်းလာသည်ကို အမှတ်မထင် ဖူးတွေ့ခဲ့သော်လည်း
မိမိ၏လက်တွဲဖေါ် ပွေးမအားပြန်ခေါ်ပါက မြတ်စွာဘုရားအားလွတ်သွားမည်စိုး၍ မိမိတစ်ဦးထဲသာ မြတ်စွာဘုရားအားဖူးမျှော် ကန်တော့ဦးချခဲ့တော့သည်။
ဤအကြောင်းအား အိမ်ပြန်ရောက်၍ပွေးမ မှသိရှိသောအခါ ဂတိသစ္စာ မတည်သော လင်ဟုစွပ်စွဲကာ ပေါက်ကွဲ၍ နောင်သံသရာအဆက်ဆက် ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ရန်သူဘဝအဖြစ်သာတွေ့ဆုံရပါစေသားဟု ကျိန်စာတိုက်ဆိုခဲ့တော့သည်။
ယင်းသမိုင်းရာဇဝင် ကျိန်စာဆိုးသည် ဒွတ္တဘောင်မင်းနှင့်ဗိဿနိုးဘုရင်မ တို့၏ ရန်သူသဖွယ်အခဲမကြေသော အဖြစ်သို့ရိုက်ခတ်လာတော့သည်။
ယခုခေတ်ကာလတွင်လည်း…။ဤသမိုင်းရာဇဝင် ကျိန်စာမှာယနေ့ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီ ဟုမိမိယူဆမိပါတော့သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်…,,ပြည်မြို့တစ်ဖက် ကမ်းပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ ရှေးဟောင်းတန်ခိုးကြီး ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားနှင့် ဖိုးဦးတောင် ဘုရား ကြားရှိ “မဟာပဏီတ ပရဟိတအောင်တော်မူစေတီကြီး”တွင်
ဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့၏တွက်ဆချက်အရ နှစ်ပေါင်း သန်း(၃၀)ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း “လိပ်”အထီးကြီး(ကျောခွံ ခုံးသည်) ရောက်ရှိ သာသနာပြုခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၄ခုနှစ်(၆နှစ်) ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ (အင်္ဂါနေ့)တွင် ပခုက္ကူမြို့နယ်ဖက်မှ ထပ်မံ ၍ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလိပ်အမကြီးတစ်ကောင်( ကျောခွံအနည်းငယ်ပြားသည်) ရရှိခဲ့၍ ပရဟိတစေတီတော်တောင်ပေါ်တွင်
ပွေးဖို ပွေးမ၊ဒွတ္တဘောင်နှင့်ပိဿနိုးတို့၏ ကျိန်စာများပျက်ပြယ်သွားသည့်အလား လိပ်ဖိုကြီးနှင့်လိပ်မကြီးတို့ အတူယှဉ်တွဲသစ္စာဆိုကာ ….
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖူး မျှော်ဦးတိုက်ကန်တော့ပန်းဆင်နေသည့် အလား ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိစွာဖြင့် ရေကန်တစ်ကန်ထဲ အတူတကွတည်ရှိနေပြီဖြစ်တော့သည်။
(ကျော်သူ) ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လိပ်ထီးနဲ့ လိပ်မကြီးရဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြရင်းဦးကျော်သူ ပြောပြခဲ့တဲ့ သမိုင်းရာဇဝင် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အခုလို ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အတွေးအမြင်ကိုလည်း မျှဝေခဲ့ပါဦးရှင်။
သမိုင်းရာဇဝင် ဖြစ်ရပ်ဆန်း ဗိဿနိုး ကျိန်စာ ပျက်ပြယ်ပြီလို့ ယူဆမိတဲ့ အကြောင်း ဦးကျော်သူပြော
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး ဦးကျော်သူကတော့ တစ်ခေတ် တစ်ခါက အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရား အထူးကိုင်းရှိုင်းပြီး နာမှုကူညီရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း အားကြိုးမာန်တက်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂတိသစ္စာပြု ခဲ့သော်လည်း ပွေးဖိုမှာ တောတွင်းအစာရှာရင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွမြန်းလာသည်ကို အမှတ်မထင် ဖူးတွေ့ခဲ့သော်လည်း
ဤအကြောင်းအား အိမ်ပြန်ရောက်၍ပွေးမ မှသိရှိသောအခါ ဂတိသစ္စာမတည်သော လင်ဟုစွပ်စွဲကာ ပေါက်ကွဲ၍ နောင်သံသရာအဆက်ဆက် ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ရန်သူဘဝအဖြစ်သာတွေ့ဆုံရပါစေသားဟု ကျိန်စာတိုက်ဆိုခဲ့တော့သည်။
ယခုခေတ်ကာလတွင်လည်း…။ ဤသမိုင်းရာဇဝင် ကျိန်စာမှာယနေ့ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီ ဟုမိမိယူဆမိပါတော့သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်…,,ပြည်မြို့ တစ်ဖက်ကမ်းပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ ရှေးဟောင်းတန်ခိုးကြီး ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားနှင့် ဖိုးဦးတောင် ဘုရား ကြားရှိ “မဟာပဏီတ ပရဟိတအောင်တော်မူစေတီကြီး”တွင်
ဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့၏ တွက်ဆချက်အရ နှစ်ပေါင်းသန်း(၃၀)ခန့်ရှိပြီဖြစ်သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း “လိပ်”အထီးကြီး(ကျောခွံ ခုံးသည်) ရောက်ရှိ သာသနာပြုခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၄ခုနှစ်(၆နှစ်) ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ (အင်္ဂါနေ့)တွင် ပခုက္ကူမြို့နယ်ဖက် မှ ထပ်မံ၍ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလိပ်အမကြီးတစ်ကောင်( ကျောခွံအနည်းငယ်ပြားသည်) ရရှိခဲ့၍ ပရဟိတစေတီတော်တောင်ပေါ်တွင်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖူးမျှော် ဦးတိုက်ကန်တော့ပန်းဆင်နေသည့် အလား ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိစွာဖြင့် ရေကန်တစ်ကန်ထဲ အတူတကွတည်ရှိနေပြီဖြစ်တော့သည်။
(ကျော်သူ) ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း လိပ်ထီးနဲ့ လိပ်မကြီးရဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြရင်းဦးကျော်သူ ပြောပြခဲ့တဲ့ သမိုင်းရာဇဝင် ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အခုလို ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အတွေးအမြင် ကိုလည်း မျှဝေခဲ့ပါဦးရှင်။